Man United oo u dhaqaaqday daafac katirsan Ac Milan | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Man United oo u dhaqaaqday daafac katirsan Ac Milan
Man United oo u dhaqaaqday daafac katirsan Ac Milan
Posted by: Mahad Mohamed April 18, 2019
Himilo FM –Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u gudbisay daafaca kooxda AC milan Davide Calabria. United ayaa si lama filaan ah waxay ugu dhaqaaqday daafaca ka ciyaaro dhanka middig, waxayna dooneysaa inay beddal uga dhigto Antonio Valencia kaas oo kooxda United ka dhaqaaqi doono dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga kooxd PSG ee lagu magacaaboThomas Meunier iyo daafaca kooxda Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka ayaa sidoo kale waxaa lala xiriirinayay kooxda United inay ku soo biiriso garoonka Old Trafford marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
Si kastaba ha ahaatee Calciomercato ayaa warineyso in kooxda shayaadiinta ay diirada saari doonto qaabkii ay kooxda Ac Milan xiddigooda ay heshiis cusub ula gaari laheyd, si ay ugu soo biiriso horyaalka Premier league xilli ciyaareedka 2019-2020.
22 jirkan ayaa heshiiska uu ku joogo garoonka San Siro waxa uu ku egyahay xili ciyaareedka 2022, waxaana uu kooxdiisa u dhaliyay keliya hal gool isagoo caawiyay hal gool oo kale 32 kulan oo uu ka soo muuqday safka kooxda xili ciyaareedkan.
Previous: Mareykanka: Cunug dhashay maqaar la’aan
Next: 4 sabab oo uusan Ronaldo mar kale ugu guuleysan karin jaa’isada Ballon d’Or